Devil Idiom - Learn English The Smart Way
Devil စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ
​ဒီတပတ် English Learning: American Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ မကောင်းဆိုးဝါးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Devil ဝေါဟာရကို အခြေခံတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများဖြစ်တဲ့ Play devil’s advocate, Talk of the devil နဲ့ Between the devil and the deep blue sea တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Play devil’s advocate
Play က သာမန်အားဖြင့် ကစားတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပေမဲ့ ဒီနေရာမှာတော့ အခန်းတခုခုကဝင်ပါတာ၊ သရုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Devil’s (မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့ )၊ Advocate (ရှေ့ နေလိုက်ပေးတာ၊ အကျိုးဆောင်ပေးတာ) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစကားစုရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ မကောင်းဆိုးဝါးအတွက် ရှေ့ နေလိုက်ပေးတာ၊ မကောင်းဆိုးဝါးအကျိုး လိုက်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ Devil’s advocate က Catholic ဘာသာကနေ ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Catholic ဘာသာမှာ Saint သူတော်စင်အဖြစ် ချီးမြှင့်ထိုက်သူကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက တရားဝင် သူကောင်းမပြုမီ၊ အဲဒီသူတော်စင်လောင်းရဲံ့ အားနည်းချက်တွေကို လေ့လာစီစစ်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို Devil’s advocate လို့ ရည်ညွန်းခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ တခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ်က အမြင်တခုကို သဘောတူလက်ခံထားပေမဲ့လဲ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ ကန့်ကွက်ဝေဖန်သူတွေဖက်က အမြင်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကို တင်ပြဆွေးနွေးတာကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဖက်အမြင်၊ အများဝေဖန်ခံရတဲ့အမြင်၊ နှားခေါင်ရှုံစရာကောင်းတဲ့ အမြင်မျိုး စသဖြင့်ဖက်ကနေ ရှေ့ နေလိုက်ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတဦးအနေနဲ့ အဲဒီ ဆန့်ကျင်ဖက်အမြင်ကို ကိုယ်တိုင်လက်မခံပေမဲ့ အဲဒီနေရာမှာ ကိုယ်ကဝင်ပြီး ပြောကြည့်တာ၊ ဝင်ပါကြည့်တာ၊ ဝင်ပါဆွေးနွေးကြည့်တဲ့လူမျိုးကို အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်အရ Devil’s advocate လို့ ရည်ညွှန်းသုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလုပ်တဲ့အတွက် ဝိုင်းပြောခံရ၊ ဝိုင်းဝေဖန်ခံရမယ်ဆိုတာကို နားလည်ရက်နဲ့ သိသိကြီးလုပ်တာမျိုးကိုလည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာမှာ တခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အတိုက်အခံနေရာမှာဝင်ပြီး သွေးတုိးစမ်းတဲ့အနေနှင့်မေးခွန်းဝင်ထောက်ပေးတာ၊ ဝင်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြပေးတာမျိုး ၊ အစမ်းသဘောပြောကြည့်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Most people say Myanmar is not ready for foreign investment. Although I agree with this in principle, let me be the devil’s advocate and say the country is ready .
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူးလို့ အများက ပြောကြတယ်။ ကျနော်ကတော့မူအားဖြင့်တာကိုလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သွေးတိုးစမ်းတဲ့အနေနှင့်ဆန့်ကျင်ဖက်ကနေပြီးအဆင်သင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်တယ်ဗျာ။
(၂) Talk of the devil
Talk (ပြောတာ)၊ Of (ရဲ့ )၊ the Devil (မကောင်းဆိုးဝါး) ဆိုတော့ ဒီစကားစုရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က မကောင်းဆိုးဝါးအကြောင်း ပြောဆိုတာပေါ့။ ဒီအသုံးမှာ Talk အစား Speak ကို အစားထိုးသုံးပြီး Speak of the devil လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီအသုံးဟာ ရှေးအလယ်ခေတ်က ဆင်းသက်လာပြီး မကောင်းဆိုးဝါးအကြောင်း ပြောရင် တကယ်ဘဲကိုယ့်အနားကို ပေါက်ချလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အယူသည်းမှုကနေ ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အီဒီယံဆိုတဲ့သွယ်ဝိုက် အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူတဦးအကြောင်း ပြောဆိုနေတုန်း အဲဒီလူက ဘယ်ကနေမှန်းမသိ ကိုယ့်ရှေ့ ကို ပေါက်ချလာတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာမှာ ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ ပေါက်ချလာလို့ အသက်တော့ ရှည်အုံးမယ်လို့ ပြောတဲ့ဓလေ့နဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
I haven’t seen Maung Maung for ages. Talk of the devil, here he comes!
ကျနော် မောင်မောင်နဲ့ မတွေ့ရတာ အတော်ကြာပြီ။ ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ ရုတ်တရက် သူ ပေါက်ချလာပြီ။
(၃) Between the devil and the deep blue sea
Between (ကြားမှာ)၊ the Devil (မကောင်းဆိုးဝါး)၊ and (နှင့်)၊ the Deep (နက်တာ)၊ Blue (အပြာရောင်)၊ Sea (ပင်လယ်) ဆိုတော့ ဒီစကားစုရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တဖက်ကတော့ မကောင်းဆိုးဝါး၊ တဖက်မှာတော့ နက်တဲ့ပင်လယ်ပြာ ရှိနေတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က တဖက်ကကြည့်လည်း မစားသာ၊ နောက်တဖက်ကြတော့လည်း မလွယ်ကြော ဖြစ်နေတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ အန္တာရယ်နှစ်ရပ်ကြား ကျရောက်နေတာမျိုး မို့၊ ကျမတို့ မြန်မာမှာတော့ ဘေးကျပ်နံကျပ် ပိတ်မိနေတာမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။ ဘယ်ဖက်မှလဲ မလွယ်ပါလားဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးပေါ့။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Print media in this country is caught between the devil and the deep blue sea. The costs of printing are very high but if you raise the price, the circulation can go down.
အဲဒီနိုင်ငံမှာ ပုံနှိပ်စာနယ်ဇင်းအနေနဲ့ ဘေးကျပ်နံကျပ်ဘဲ။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခတွေကလည်းသိပ်ကိုဈေးကြီးတယ်။ တဖက်မှာဈေးနှုန်းကို မြှင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရောင်းရတဲ့စောင်ရေကျသွားနိုင်တယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြခဲ့တဲ့ Devil စကားလုံးကိုအခြေခံတဲ့ Idiom အသုံးတွေက Play devil’s advocate, Talk of the devil နဲ့ Between the devil and the deep blue sea တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။